Ogaden News Agency (ONA) – Wafti JWXO ah oo uu hogaaminayo Hoggaanka Bulshada & Adeegga Dadwaynaha ayaa dalka Turkiga booqasho ku jooga
Wafti JWXO ah oo uu hogaaminayo Hoggaanka Bulshada & Adeegga Dadwaynaha ayaa dalka Turkiga booqasho ku jooga
Waxaa waddanka Turkiga in muddo ahba booqasho ku jooga wafti ka socda Jabhadda Waddaniga Xoraynta Ogaadeenya JWXO, kaasoo la kulmay hoggaamiyayaasha qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee waddankaas, hay’ado warbaahineed iyo kuwo arrimaha samafalka ka shaqeeya.
Waftigani wuxuu ka kooban yahay Guddoomiyaha Hoggaanka Bulshada & Adeegga Dadwaynaha mudane Axmed Yaasiin Sh Ibraahim iyo Wakiilka Bariga Dhexe u qaabilsan Hoggaanka Arrimaha Dibada mudane Maxamed Cabdi Maxamed (Gacmadheere), wuxuuna booqashadiisa ku maray magaalooyin badan oo ku yaalla woqooyiga iyo bariga dalka Turkiga.
Waftigu wuxuu dalka Turkiga gaadhay markii ay taariikhdu ahayd 17/04/2014, waxaana booqashadiisu timid ka dib markii uu martiqaad ka helay Xisbiga Hur Davat Partisis “The Free Cause Party”, oo ka mid ah xisbiyada mucaaradka ah ee waddanka Turkiga ka jira, kaasoo shacbiyad aad u baallaadhan ku leh gaar ahaan Bariga Turkiga.
Maalinimadii sabtida ee taariikhud ahayd 19/04/14 wuxuu waftigu ka qayb galay kulan ballaadhan oo taageerayaasha xisbigu ku qabteen magaalo Kacbi lagu magacaabo oo u dhaw magaalada wayn ee Diyarbakir oo ku taalla bariga Turkiga, wuxuuna halkaas waftigu kula hadlay dadwaynihii kulanka isugu soo baxay, isagoo uga warbixin faahfaahsan ka siiyay xaaladda Ogaadeenya iyo sida ay dhibaatada Ogaadeenya ku billaabatay.
Maalinimadii axadda ee taariikhdu ku beegnayd 19/04/14 wuxuu waftigu sidoo kale ka qayb galay kulan-diineed wayn oo lagu qabtay magaalada Diyarbakir, kaasoo lagu maamuusayay qadiyadaha muslimiinta, sida Falastiin, Masar, Ogaadeenya iyo Suuriya, waxaana ka qayb galay dadwayne hal milyan oo qof gaadhaya. Waftigu wuxuu ka mid ah wufuud meelo kala duwan ka timid oo kulanka lagu martiqaaday, iyadoo dadkii halka milyan ahaa ee isu soo baxay halkaas ku barteen qadiyada Ogaadeenya iyo dhibaatada ay Itoobiya ku hayso dadwaynaha Ogaadeenya.
Waftigu wuxuu ku wareegay dugsiyo wax lagu barto oo ku yaalla magaalooyinka Diyarbakir iyo Batman, isagoo ardayda iyo macalimiinta dugsiyadaas uga sheekaynayay qadiyada Ogaadeenya iyo inay tahay mid ka mid ah dhibaatooyinka uu abuuray isticmaarkii reer Yurub, walina ay reer Galbeedku taageero dhinac walba ah siiyaan gumaysatada Itoobiya. Waftigu wuxuu ardayda iyo macalimiinta dugsiyadii uu booqday ku guubaabinayay inay bartaan qadiyada Ogaadeenya oo macluumaadkeeda raadiyaan, isla markaana ay saaxiibbadood uga sii sheekeeyaan, wixii taakulo ah ee ay awoodaana ay u fidiyaan walaalahooda muslimiinta ah ee reer Ogaadeenya.
Waftigu wuxuu sidoo kale la kulmay Jamciyadda Culimada, oo ah hay’ad aad u awood badan oo ka shaqaysa arrimaha ay ka midka yihiin wacyi galinta, barashada diinta islaamka, dhexdhexaadinta dadka is-khilaafa iwm. Waftigu wuxuu xubnaha iyo masuuliyiinta hay’adda u sharxay soo yaalka qadiyada Ogaadeenya iyo sida ay uga gaabiyeen dunida islaamku inay gacan siiyaan dadwaynaha Soomaalida Ogaadeenya ee dagaalka gobonimo doonka ah kula jira xukuumadda gumaysatada Itoobiya ee taageerooyinka dhinac walba ah ka helaysa dunida inteeda kale, gaar ahaan kuwa reer galbeedka ah. Masuuliyiinta hay’addu waxay aad uga cudurdaarteen inayna aqoon badan u lahayn qadiyada Ogaadeenya, isla markaana ayna horay u maqlin, waxayna ballanqaadeen inay wixii hadda ka denbeeya gacan ka gaysan doonaan sidii dadka reer Ogaadeenya garab iyo gaashaanba loola garab istaagi lahaa.
Intii uu boqashada ku jiray wuxuu waftigu waraysiyo kala duwan siiyay qaar ka mid ah warbaahinta dalka Turkiga, oo si wayn uga hadashay arrimaha Ogaadeenya. Wargaysyada, Wakaaladaha Wararka, Idaacadaha iyo Tilifishinnada ayaa waraysiyo kala duwan la yeeshay waftiga, waxaana ugu muhiimsanaa waraysi dheer oo lagu falanqaynayo xaaladda Ogaadeenya oo maalinimada Jimcaha ah (25/04/14) laga sii daynayo tilifishinka Heber, oo ah tilifishin adduunka oo dhan laga daawado. Barnaamijkani wuxuu ka hadlayaa qadiyada Ogaadeenya, tan iyo markii uu gumaysigu cagaha soo dhigay ilaa iyo xaaladda ay maanta ay ku sugan tahay. Waxaa lagy falanqaynayaa xaaladaha siyaasadeed, bani’aadamnimo iyo heerka uu halganku marayo iyo waxyaabaha u qabsoomay JWXO, dhinac ciidan iyo dhinac siyaasadeedba. Waxaa barnaamijka la socda filimo muujinaya xaaladda Ogaadeenya ka jirta iyo dhibaatooyinka uu gumaysigu ku hayo dadwaynaha rayadka ah ee Ogaadeenya.
Waftiga waxaa lagu soo wareejiyay qaar ka mid ah goobaha taariikhiga ah ee waddanka Turkiga. Waxaa la soo mariyay magaalooyinkii xarumaha u ahaa dawladihii hore ee muslimiinta ahaa iyo kuwo diimo kale haystay. Meelaha ugu caansan ee waftiga la soo mariyay waxaa ka mid ah Masaajidka Sulaymaan Khaalid Bin Waliid, oo loogu magac daray Saxaabi ku shihiiday dagaalkii lagu furtay magaaladaDiyarbakir, isla markaana ay ku aasan yihiin 27 ka mid ah Saxaabadii dagaalkaas ku shihiiday. Waxaa kaloo lagu soo wareejiyay magaalooyinka taariikhiga ah ee Mardin, Xasan Kayf iyo Darca oo ku yaalla dhinaca xadka Suuriya.
Maalinimadii khamiista ahayd ee taariikhdu ku beegnayd 24/04/14, wuxuu waftigu kulan rasmi ah la yeeshay madaxda xisbiga HUR DAVAT PARTISIS. Waftiga waxaa xafiiskiisa ku qaabilay guddoomiye ku xigeenka xisbiga, ahna madaxa xafiiska siyaasadda mudane Xuseen Yelmaz. Labada dhinac waxay ka wadahadleen waxyaabaha la iska kaashan karo iyo sidii loo sii xoojin lahaa xidhiidhka u dhexeeya xisbiga iyo JWXO. Labada dhinac waxay sidoo kale ka wadahadaleen sidii la isaga kaashan lahaa dhinacyada warbaahinta iyo arrimaha bani’aadamnimada. Labada dhinac waxay isla gaadheen heshiiyo wax ku-ool ah oo arrimahaas ku saabsan, kuwaasoo la filayo inay wax wayn ka baddali doonaan xidhiidhka labada shacbi ee Ogaadeenya iyo Turkiga.